Mangalatra ny Bait amin'ny Phishers | Martech Zone
Mangalatra ny Bait amin'ny Phishers
Alarobia, Martsa 21, 2007 Alahady 21 Janoary 2018 Douglas Karr
Efa mba nanjono ve ianao any amin'ny toerana itohizanao foana ny filahanao ary minitra vitsy aorian'izay dia tsy eo intsony ny paoninao? Ela ny ela dia alainao ny andalanao ary lasa any amin'ny toeran-kafa, sa tsy izany?
Ahoana raha nampiharintsika tamin'ny Phishing io? Angamba ny olona tokana rehetra izay mahazo mailaka phishing dia tokony tsindrio ilay rohy ary mampiditra fampahalalana ratsy amin'ny fidirana na takiana amin'ny Credit Card. Angamba tokony hihoatra ny fifamoivoizana ataon'izy ireo tokoa isika ka mahafoy azy ireo!
Moa ve tsy fiarovana mahery vaika kokoa io raha oharina amin'ny fiezahana hamantatra ireo tranonkala Phishing sy hisakana ny olona tsy hanaraka azy ireo?
Araka ny Wikipedia: Amin'ny computing, ny phishing dia asa ratsy amin'ny fampiasana teknika injeniera sosialy.  Ny phishers dia manandrana mahazo fampahalalana saro-pady, toy ny anarana mpampiasa, teny miafina ary antsipirian'ny kara-trosa, amin'ny alàlan'ny fisokafan'izy ireo ho olom-banona azo antoka amin'ny fifandraisana elektronika. Ebay sy Paypal dia orinasa roa lasibatra indrindra, ary lasibatra iraisana ihany koa ny banky an-tserasera. Ny phishing dia matetika atao amin'ny alàlan'ny mailaka na hafatra eo noho eo,  ary matetika dia mitarika ireo mpampiasa amin'ny tranokala iray, na dia efa nisy koa ny fifandraisana an-telefaona.  Ny fiezahana hiatrehana ny fitomboan'ny isan'ny trondro fisakafoanana voalaza fa misy ny lalàna, ny fampiofanana ny mpampiasa ary ny fepetra teknika.
Liana aho raha mety izany. Fanamarihana
Ity misy mailaka phishing azoko isan'andro isan'andro amin'ny mailako:
Tena iriko ny hanakorontanana ireto bandy ireto. Etsy andanin'izany, i Firefox dia manao asa tsara hamantarana ireo tranonkala ireo:
Na dia tsy azonao sakanana aza ny olona manambaka ny orinasanao amin'ny mailaky ny phishing dia azonao antoka fa ny ISP izay manamarina ny fahaizanao alohan'ny hamelana azy ireo hidina anaty boaty dia tsy afaka manamarina ny fihaviany. Vita amin'ny fampiharana ny fanamarinana mailaka rafitra tahaka ny SPF ary DMARC.
Tags: DMARCfanamarinana mailakaphishingspffiraketana spf
Mamporisika ny mpanasa anao ve ianao?
Atsaharo ny fanoratana ho an'ny milina fikarohana